Okwu Ntụgharị Uche maka Wednezdee Ọma (WEDNEZDEE NTỤ)
Previous Article Ụka Igunkwụ - Ndụ Ịchụ Àjà
Next Article Òtù 'Apostle Amaka Care Foundation' Enyerela Ndị Ụwa Na-Atụ n'Ọnụ Aka n'Idemili
Dịka ndị otu Kraịst, na-ebido oge Lent na ụbọchị Wednezdee ntụ, ọ bụ ohere ịji were lebaa anya na ngalaba atọ pụtara ìhè n'ime Lent: ịbu ọnụ, inye onyinye na ekpere.
Ọ dị mkpa k'anyị sonye nke ọma n'emume nke mmụọ a. Site na ịbu ọnụ, anyị ga-adị ike ịji were merie agụụ niile nke anụ arụ, ma cheta na Chineke enyewo anyị ike ịji were merie ọnwụnwa niile.
Site n'ịnye onyinye, anyị ga-ewere ihe anyị nwere nyetụ ndị o nweghị ka ọ há ha na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ezi àgwà dị otu a ga-enyere anyị aka ịmata na anyị niile bụ otu ezinaụlọ n'ime Chineke.
Nanị otu Chineke dị nke ji ike niile maka ndụ anyị. Maka ezi ọlụ niile nke ebere na obiọma anyị mere site na onyinye anyị nyere mmadụ ibe anyị, bụ Christ k'anyị mere ya (Matiu isi nke iri abụọ na ise, amaokwu nke iri anọ)
Site na ekpere, anyị ga-amata na ndabere anyị dị na Chineke.
Ekpere Maka Wednezdee Ntụ
Onyenweanyị, Onye Nsọ, mere anyị ebere. Anyị ekwupụta mmehie anyị n'iru gị. Anyị emehiewo megide Gị ma ewepụ ebere gị na amara gị, anyị ga-abụ ntụ. Anyị echegharịa na mmehie niile anyị ugbua. Onyenweanyị, dịka anyị na-abanye n'ime oge Lent a, nọrọ anyị nso. Nyere anyị aka site na mmụọ nsọ gị, k'anyị were nwee ezi nchegharị sitere n'ime obi anyị. Nyere anyị aka site na mmụọ nsọ gị, k'anyị were nwee ume iji were merie onye iro.
Ekele dịrị gị, Onyenweanyị, na mmemme mbilite na ọnwụ gị na-abịa! Ọnwụ enweghị ike, o nweghịkea mmeri n'ihi Jesus. Ebube, nsọpụrụ na otuto dịrị aha gị. Nara ekele n'ihi na ị napụtawo anyị. Nyere anyị anyị ịnọgide n'ume na ọñụ nke oge a dịka anyị na-aga n'ime ịsụ niile nke dị n'ime ya. Nyere anyị aka ịmị mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ.
Ekele dịrị Gị na ntụ nke dị na egedege ịhu anyị egosighị ihe anyị bụ. Ọ bụ ezie na site na ntụ ka anyị si pụta, mana arụ anyị na mmụọ anyị na onwe anyị, nọ na-echere mgbapụta ọma ahụ na nyeghachi zuru okè nke ihe niile. Nyere anyị aka ilegide anya ụbọchị ahụ, ma mee ka ọ bịa ọsịsọ, Onyenweanyị Jesus Christ. Amen.
Abụ Ọma Iri Ise na Otu - Ekpere Site na Mgbe Ochie Gbasara Wednezdee Ntụ.
Abụ Ọma nke diri Onye-isi Abù. Abù Ọma Devid: mb͕e Netan, bú onye-amuma, biakutere ya, mb͕e ọ bakusiri Bat-sheba.
Merem amara, Chineke, dịka ebere Gị si dị; dịka ịba ụba nke obi ebere Gị niile si dị, hichapụ njehiem nile.
Sacha m nke ọma dịka ákwà ka ajọ omume m pụa n'imem, me kwa ka m si na nmehie m dị ọcha.
N'ihi na mụ onwem mara njehie m niile; nmehie m dịkwa n'irum mgbe niile.
Megide Gị, nání Gị, ka m mehieworo, ọ bụ kwa ihe jọrọ njọ n'anya Gị ka m meworo; ka Ị we bụrụ onye ezi omume mgbe ị n'ekwu okwu, dịkwa ọcha n'obi mgbe Ị n'ekpe ikpe.
Lee, n'ajọ omume ka amụpụtara m; ọ bụkwa na nmehie ka nne m tụrụ ime m.
Lee, eziokwu n'akụkụ niile dị n'ime mmadụ atọwo Gị ụtọ; ọ bụkwa n'akụkụ zoro ezo ka ị na-eme ka m mara amamihe.
Ị ga-ewere hyssop wepụ nmehiem, m ga-adịkwa ọcha; ị gasacham dịka ákwà, m ga-adịkwa ọcha karị snow.
Ị ga-eme ka m nụrụ olu obi ụtọ na ọṅù; ka ọkpụkpụ niile ị gwepịaworo we tegharịa egwú-ọṅù.
Zopu iru Gị na nmehiem nile, hichapụkwa ajọ omume m nile.
Kère m obi dị ọcha, Chineke; me kwa ka mmụọ nke n'eguzosi ike dị ọhụrụ n'imem.
Atụpụla m n'iru Gị; a narakwala m Mmụọ Nsọ Gị.
Nyeghachi m obi ụtọ nke nzọputa-Gi; were kwa mmụọ nke amara aha ya kwagide m.
M ga-ezí ndị njehie ụzọ Gị niile, ndị nmehie ga-alaghachikwute kwa Gị.
Napụta m n'aka ikpe ọmụma ọbara dị iche iche, Chineke, bụ Chineke nke nzọpụta m; irem g'eti nkpu ọṅù bayere ezi omume Gị.
Onyenweanyị, ị ga-emeghe egbugbere ọnụ m abụọ; ọnụ m g'egosikwa otuto Gị.
N'ihi na àjà adịghị atọ Gi utọ; ka m we nye ya: àjà nsure ọkụ adịghị atọ Gị ụtọ.
Àjà niile nke Chineke bu mmụọ tiwara etiwa; obi tiwara etiwa na nke egwepịara egwepịa, Chineke, ị dịghị eleda ya anya.
Mere Zaion mma dịka O si dị Gị utọ: Ị ga-alụ mgbidi niile nke Jerusalem.
Mgbe ahụ ka àjà niile nke ezi omume, bú àjà nsure ọkụ na àjà nsuresi ọkụ, ga-atọ Gị ụtọ; mgbe ahụ ka ha ga-achụ ọtụtụ oké ehi n'elu ebe ịchụ àjà Gị. Amen.
Ka Chineke nọnyeere anyị n'ime oge a. Amen.